Pisarema revanakomana vaKora.+ Rwiyo. 87 Guta rake rakavakirwa mumakomo matsvene.+ 2 Jehovha anoda magedhi eZiyoni+Kupfuura matende ese aJakobho. 3 Zvinhu zvinoshamisa kwazvo zviri kutaurwa pamusoro pako, haiwa iwe guta raMwari wechokwadi.+ (Sera) 4 Ndichaverenga Rahabhi+ neBhabhironi pakati pevaya vanondiziva;Pane Firistiya uye pane Tire, pamwe chete neKushi. Zvichanzi: “Uyu ndiye akaberekerwa ikoko.” 5 Uye zvichanzi nezveZiyoni: “Mumwe nemumwe akaberekerwa mariri.” Uye Wekumusorosoro acharisimbisa kwazvo. 6 Paanenge achinyora marudzi, Jehovha achazivisa kuti: “Uyu ndiye akaberekerwa ikoko.” (Sera) 7 Vaimbi+ pamwe chete nevaya vanenge vachitamba vachitenderera+ vachati: “Zvitubu zvangu zvese zviri mauri.”*+
^ Kana kuti “Muri tsime rezvinhu zvese kwandiri.”